कस्तो स्थानीय सरकार प्रमुख चुनिएछ नि, एसएसपीले थर्काउने! – MySansar
कस्तो स्थानीय सरकार प्रमुख चुनिएछ नि, एसएसपीले थर्काउने!
Posted on July 31, 2017 July 31, 2017 by Salokya
विद्यासुन्दर शाक्य व्यक्ति हैनन्, उनी निर्वाचित स्थानीय सरकार प्रमुख हुन्। ६४ हजार भोट ल्याएर जित्ने उम्मेदवार मात्र हैनन्, राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै बासिन्दाका मेयर हुन् उनी। नयाँ संविधानले उनलाई स्थानीय सरकार अर्थात् नगरकार्यपालिकाको प्रमुख मात्र हैन, नगरसभा अर्थात् स्थानीय संसदको प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। काठमाडौँ महानगरलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउने उनको हो जिम्मेवारी। उनले हो बैठक डाक्नुपर्ने सबै सरोकारवाला निकायसित। तर आज अनौठो देखियो। एक एसएसपीले डाकेको बैठकमा पुगेर उनको थर्काइ खाएछन्। ‘तपाईँले नसक्ने भए म गर्छु’ भनेर एसएसपीले निर्वाचित मेयरलाई वचन लाएछन्।
हजुर, आज महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले डाकेको बैठकमा मेयर शाक्य गएका थिए। एसएसपी खनाललाई प्रहरी हेडक्वार्टरले डिआइजीका लागि एक नम्बरमा सिफारिश गरिसकेको छ। तर त्यो सिफारिश अनुसार उनले पदबहाली गरिसकेका छैनन्। त्यही भएर अहिलेलाई उनी एसएसपी नै हुन्।
उनैले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई बिहान ९ बजे बोलाएका थिए। तर उनी नआएपछि कार्यक्रम स्थलबाटै एसएसपी खनालले पौने १० बजे शाक्यलाई फोन गरेर साइरन बजाएर भए पनि तुरुन्त आउन ‘निर्देशन’ दिएका थिए।
केही समयपछि मेयर आइपुगे। एसएसपी खनालले उनलाई तत्काल सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडक बत्ती बाल्नको लागि भने। त्यतिमात्र हो र, ‘सडक बत्ती बाल्न तपाईँ सक्नुहुन्न भने मसँग मान्छे छन्, म काम अगाडि बढाउँछु’ सम्म भने।
उल्टो भइरहेको थियो। खासमा मेयर शाक्यले आफ्नो कार्यकक्षमा डाक्नुपर्ने थियो ट्राफिक प्रहरीलाई। अनि भन्नुपर्ने थियो- के ताल हो यो? सँधै किन ट्राफिक जाम? काठमाडौँ कुन कुन चोकमा किन जाम हुन्छ? के कारणले जाम हुन्छ? तुरुन्त कार्ययोजना बनाउनुस् जाम हटाउने। मैले जामरहित सहरको नारा दिएको छु चुनावी एजेन्डामा। १०० दिनभित्र यो काम गर्नुपर्नेछ। महानगरले के के गर्नुपर्‍यो सहयोग, तपाईँ भन्नुस् हामी तयार छौँ।
तर यहाँ त ट्राफिकका हाकिमले डाकेको बैठकमा मेयर सहभागी भएर स्पष्टिकरण दिइरहेका थिए। अहो नि ! कस्तो स्थानीय सरकार प्रमुख चुनिएछ नि! सँधै बचाउ गर्दै हिँड्नु पर्ने। कहिले मोबाइल किन्ने डिसिजनको बचाउ गर्दै हिँड्नु पर्ने। कहिले ट्राफिकको हाकिम अगाडि महानगरको बचाउ गर्दै हिँड्नु पर्ने।
कसैकसैले महानगरका मेयरको मर्यादाक्रम त प्रहरीको एसपीभन्दा मुनि छ नि भनेर भने। हो त त्यस्तै भनेर हेरेँ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रममा त्यस्तो रहेनछ। महानगरका मेयर एआइजीभन्दा मुनि रहेछन् वरियता क्रममा। खासमा त आइजीभन्दा माथि हुनुपर्ने हो महानगरका मेयर त।
22 thoughts on “कस्तो स्थानीय सरकार प्रमुख चुनिएछ नि, एसएसपीले थर्काउने!”
बरियता क्रमको अनुशाशन पालना गरेर नै देशको यो स्थिति भयको हो | यहाँ प्रधान मन्त्रि लै थर्काउने कोहि नभयर देश अधोगति तिर लाग्यो !!!
जागिरेले स्कुल र क्याम्पस गरी कम्तिमा पनि पन्ध्र बर्ष अध्ययन गरेर पास गरेको हुनु पर्दछ । जुनसुकै सेवा आयोगको भएपनि परीक्षा पढेरै पास गर्नु पर्दछ । कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागेको निश्कलङ्क हुनु पर्दछ । तर राजनितिज्ञ कालो अक्षर भैंसी बराबर भएपनि हुन्छ । जति धेरै जेल बसेको हो त्यति धेरै सम्मान पाउँछन् । समग्रमा कुनै न कुनै रुपमा अपराधी साबित नभई जेल परिंदैन यस्को मतलब राजनितिज्ञ अपराधी हुनु जरुरी नै छ ।
अब हरेक महिना ताउन-हल मीतिंग गर्नु पर्छ मेएर अनि सम्बन्धित मान्छेहरु संग
gopal limbu says:
जनता ले भोट दिने बेलामा पाटी देखि केहि देख्दैन साथी हो कुकुर नै उठाए पनि अनि के दोस उम्मेदवार को जनता नै दोसी हुन् जब सम्म पार्टी भन्दा माथि जनता हुन सक्दैन तब सम्म येस्तै हो यो देस
Kamal Devkota Lutus says:
बरियता ठुलो भयेर के गर्नु??बुद्धि ले घास खाये पछि
Khum Bhandari says:
Mal Payera Chal Napaune Vanya yehi ho .
Kamal Magar Kamal Magar says:
निरबाचीत सरकार कोत बुदिईहुनुपरेनर बोलेको जसतोहुनछ कामगरनुपरेनि हावादारी नेताचुनियपछी केगरछौतहो काठमाणडौत १०१दिनमा बिसवको नमुनाहुनेभयो निहैनत कयामजा!!
manilal rai says:
कुरो सुन्दा दु:ख लाग्यो । यसमा मर्यादाक्रम भन्दा पनि उत्तरदायित्वको कुरो हो ।त्यसकारण जुनसुकै तहको भएपनी जागिरेले आफुलाई जुनसुकै तहको भएपनी निर्वाचित प्रतिनिधी भन्दा superior ठान्नु हुँदैन । जन प्रतिनिधिले बिधायिका र कार्यपालिका दुबै अधिकार बोकेको हुन्छ भने जागिरेले केवल कार्यपालिकको जिम्मेवारिमात्र बोकेको हुन्छ ।जागिरेले केवल कितावी आयोग पास गरेको हुन्छ भने जनप्रतिनिधिले जनसागरको जाँच उत्तिर्णगर्नुपर्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो पदको गरिमालाई कायम गर्न सक्ने आचरण निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
बतासे गफ लाउने हरुको औकात यत्ति नै त हो नि ।
Rajendra Kshetri says:
Nepal rajdhani nai sarnu uttam hunxa .rajdhani nai tastai thauma xa .
Yasto ni hudorahechha
राई जी, भन्न सक्छन तर तरिका पुर्याएर. होच्याएर, थर्काएर, गाली गरेर त दादा गिरि गरेर अलि सुहाएन कि?
Dilip Babu Shiva says:
गलत ब्यक्तिको हातमा प्रशासन जानुको परिणाम टाउकोमा हात राखेर हरि हरि भन्नु बाहेक केहि रहने छैन,
तपाई हामि केवल हेर्दै मात्र जाउ.,
अंमीरा बाँस्कोटा रिमाल says:
म कुटे जस्तो गर्छु त रुए झै गर्नु है भने झै हो
मिलन पोखरेल गुल्मेली says:
यहि ताल ले त होनि 100 दिनमा बिश्वको उत्कृस्ट सहर काठमांडौ बन्ने ।अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन काठमाम्डौ बासिले ।
Bishwo Nath Bhandari says:
राज्यलाई कसरी संचालन गर्ने, जनतालाई कस्तो सुविधा दिने भनेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि/सरकारले हो । सरकारी कर्मचारी त केवल भएका श्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरेर जनतालाई सहजीकरण गरिदिने हो । जब देशमा जनप्रतिनिधिले विकासका काममा चासो दिंदैनन र जनताको समस्यालाई बुझ्दैनन तब कर्मचारीहरूले उनिहरूको हुर्मत लिंदा पनि केही फरक पर्दैन ।
Sameer Xetryy says:
Kahi navaeko jatra nepalma nai hunxa hajur
जस्ले बोलाउदा जो गएनि हुन्छ, मर्यादा क्रम कर्मचारीले बनाएका हुनाले पक्कै पनि नामिलेको हो
Anjol Rana says:
ईस्माट सिटि बनाउने भन्छ तर काठमाडौ मा घाम लायो धुलो पानी पर्यो जता ततै हिलो र पानीले भरिएर खताम कतै नालिमा परिन्छ कि भन्ने डर हैट बिजोक छ ।नेता लाई कुर्चिको माया ।।।।।
राम्रो काम एस एस पी ले मात्र होइन कार्यालय सहयोगी ले पनि भन्न सक्छ र सबै को कुरा सुन्न सक्ने नै सरकार हो ,
यस्तै हो राम्रो लाई होईन हाम्रोलाई भनेर भोट दियसि
स्मार्ट फोन प्रकरण पछि मलाई यी मेयर माथि केही आशा छैन ।